Hogaamiye Kooxeedka Jwxo-shiil oo Warkiisa Muddo La la,a Yahay, Kulan Dhexmaray Ina Dhuubo iyo Hoggmiye Kooxeed Reer Muqdisho ah – Rasaasa News
Sidda aad la wada socotaan waxaa in muddo ah reerka uu kadhashay ku dhexdhuumanayey hogaamiye kooxeedka loo yaqaano ina Cumar Cismaan, dadka inta badana u yaaqaanaan JWXO SHIIL.
JWXO SHIIL wuxuu gudaha dalka Ogaadeeniya si dhumaal ah ku tagay bishii January ee sanadkan 2009. Isaga oo lagu yaqaanay aargoosi iyo qabiilkiisa oo uu uhiiliyo ayuu markiiba wuxuu bilaabay inuu dagaal ku qaado beelo sokeeye ah oo degen degaanka Jigjiga oo hadda kahor reerkooda colaad daaqsin dhexmartay.
Warar ayaa waxay sheegayaan in JWXO SHIIL Tigreegu dhaawac ku qabteen kadib markii niman gacantiisa midig ahaa oo una adeegi jiray isaga iyo qoyskiisa lagu laayey iyagoo beelahooda soo booqday. Warar ayaa waxay sheegayaan in C.nuur Sooyaan oo hadda kahor la dhuuntay computer loptop ah oo sirtii Jabhaddu ka buuxdo uu warka ukalaqaadayey in muddo ah JWXO SHIIL iyo Gumeysiga Tigreega.
Warar Xubno Sar sare oo Ciidanka xoogga dalka Ogaadeeniya laga soo xigtay ayaa sheegaya in hadda Kahor Jwxo shiil aflagaaddo ugeystay hogaamiyihii boqortooyada deegaanka Soomaaligalbeed Ugaas nuur Cubudhiye. Hadalka JWXO shiil ayaa ahaa! Nuur Cubudhiye reerkooda dhul barwaaqo ah ayuu dejiyey reeraha kalena dhul oomane ah oo lama degaan ah. Taasi waxay ku tusineysaa hamiga qabiilka ku saleysan ee Jwxo shiil.
CADAANI Hirmooge oo Aqoontiisa waxbarasho lagu tilmaayey in ay dugsi dhexe ka hooseyso 6 jeerna ku dhacay imtixaanka warqadda Taxiga ee dalka Denmark, kadibna iska dhaafay markuu kari waayey ayaa bishii agoosto ee sanadkii ina dhaafay wuxuu tagay magaalada Dubai ee dalka Emitates carabta, wuxuuna halkaas kula kulmay Hogaamiye kooxeedka reer Muqdishu ee Cabdi Nuure Siyaad, (Cabdi- Waal). Qorshaha laga wadahadlahayey wuxuu ahaa sidii Kismaayo wadajir loogu qabsan lahaa, sababtoo ah Cabdi – waal wuxuu haystay 4 gaadhi oo Tekniko ah, wuxuuna boos fiican ka waayey Muqdishu oo markaas Tigreegu katalina hayeen. Markaas iyada ah Cadaani Hirmooge wuxuu ka soo kicitimay dalka Eritrea telefoonka uu watayna wuxuu lambarkiisu ahaa: (00 291 715 756 4). Markaas waxaa socday Qorshe ay wadeen kooxda oqoonta gaaban ee JWXO SHIIL oo ahaa in Culimada madaxda ka ah Goboladda jubooyinka la laayo iyagoo isticmaalaya xidhiidhka ehelnimo ee dadka walaalaha ah ka dhexeeya kadibna rabay in ay fuliyaan falal waxashnimo ah oo nabadsugidda wadamo shisheeye ay ku raali galinahayaan.
Isku soo duuboo Urur ama hay’add kasta waxaa lagu hogaamiyaa sharci, Cilmi, wayo aragnimo lagabartay nolosha, diin, Iimaan iyo ujeedo wanaagsan, Laakiinse waxaad dhamaantiin ogtihiin in Xafiisyadii Jwxo shiil dadka beenta ugu sheegi jiray Kiradoodii laysu haysto, meelo badana la xidhay oo isbuucii hore Cadaani Hormooge loo diray dalka Norway si laba islaamood iyo 3 nin oo ay JWXO SHIIL isku qoysyihiin bal waxay hayaan lacag looga soo qaado, si bay yidhaah deen kirada xafiiskoodii dalka Denmark loogu bixiyo. Islaamaha ayaa cadaani imaanshiisa ka hor dad Soomaali kale ah wax kaga urursanahayey dumarbaa xabsi ku umulay ee wax nasiiya. Ileyn dadka Soomaalida Ogaadeeniya uma tegi karaane.
Markuu Cadaani uyimidna waxaa loo yeedhay 9 Ruux oo Soomaalida kale ah iyo 6 ruux oo cadaani la socotay oo labadii islaamood iyo mid ka mid ah caruurteeda ka kooban. Sadxdii ni nee JWXO SHIIL isku haybta ahaayeen danay sheegteen. Dadkii Soomaaliyeed waxay cadaani weydiiyeen sababta hadduu jabhaddaa ka tirsanyahay ay ula dagaalamaan Mujaahidiinta Soomaaligalbeed ee gaalada la dagaalanta. Wuuna dafiray in ay la dagaalamaan, laakiinse nin taxsiile ah oo dalka Norway iyo Dalka Britain midba lacag ka qaata oo hadda kahor Safaaradda Gumeysiga Etoobiya ee dalka Sweden xidhiidh hoose la lahaa, markiisii horena lacag kala soo goostay xafiiskii boostadda ee dalka Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Yusuf Guuleed ayaa yidhi, meeshaas anagaa ka daalana ee maxay iyagu ka doonteen???
Sidaad wada ogsoontihiin dalka Soomaaliya waxaa naafeeyey Hogaamiye kooxeedyo ku adeegta qabiil iyo dano gaar ahaaneed oo ubadan aargoosi iyo reerkanagaa beri reero kale wax yeeleen. Deegaanka Soomaalida Ogaadeeniya arintaas kama jirin intii ka horeysay imaanshii JWXO SHIIL uu ku yimid dalkeena. Jwxo waxaa Jeclaa dhamaan dadka Soomaalida Ogaadeeniya rag iyo dumar, Caruur iyo Ciroole, wax dadka dheyaalayna ma jirin. Dadka Soomaaliyeed iyo Jabhadaha Xoriyo doonka ahna waxaa ONLF kala dhexeeyey Iskaashi iyo walaal tinimo wanaagsan. Kooxda JWXO SHIIL uu hogaamiye waa shirkad ganacsi oo qoys leeyahay. Waxayna inta badan iska soo hormariyaan dad aqoontoodu gaaban tahay, ee aan fahmi karin ujeedada dhabta ah ee kadambaysa waxa loo diray ama kuwa aargoosiga jecel ee dakanooyinka reer baadiya iyo colaadaha daaqsinta uruuriya.
Sheeko gaaban hadaan tusaale ugu soo qaadano xaaladda Hogaamiye kooxeedka dagaal ooge JWXO SHIIL Maanta ku suganyahay:
Waxaa la yidhi nin ayaa faqiir ahaa, maalintii dambe ayuu damcay inuu isdilo waayo noloshiisii buu nacay. Darbi dheer buu istaagay si uu uga boodo kadibna xanuunka naftu u dhaafo. Hadal ayuu maqlay ninkii waxaana lagu yidhi ninyahow ha is dilin, shaqaa lagu siine? Waa shaqo noocee ah ayuu yiri? Waxaa layidhi Malagga nafta qaada ayaa lagu tusi si aad dadka buka ugu sheegto qofka dhimanahaya iyo midka noolaan doona markaana aad lacag uga qaadato. Ninkii ayaa yidhi hawraarsan. Wuxuu arki jiray Malagga oo hadii qofka uu xagga hore kaga yimaado qofkaas nafta ayuu ka qaadi jiray, hadduu xagga dambe kaga yimaadana qofkaasi xanuunka wuu ka kicjiray. Maalintii dambe ayuu malaggii ninka laftiisii hagga hore kaga yimid! Markaas ayuu bilaabay inuu kolba dabada u duwo malaggii! Ilaa isagoo warwareegi naftii laga qaaday. Taasi waa sheeko aad ugu haboon xaaladda maanta ee dagaal oooge JWXO SHIIL CUMAR CISMAAN iyo ku aqoonta gaaban ee weli agtaagan.
Taariikhdu iyadaa is qorta.